Iyo nyowani Sonos Imwe SL, mutauri asina mamaikorofoni, ikozvino yawanikwa ye199 euros | Gadget nhau
Iyo nyowani Sonos Imwe SL, mutauri asina mamaikorofoni, ikozvino yawana ma199 euros
Kana tichitsvaga maspika akachenjera, isu tine yedu yakawanda sarudzo, kunyangwe mazhinji acho asina kugadzirirwa kana kugadzirirwa kunakidzwa nemumhanzi watinoda nehunhu hwahwo. Kana isu tiri kutsvaga yemhando yepamusoro, Tinogona ikozvino kukanganwa zvese zviri zviviri Google Imba uye mazhinji eAmazon Echo.
Sonos ndeimwe yesarudzo shoma dziripo parizvino pamusika, kana kuwedzera kune mutauri akangwara isu tiri kutsvaga mhando yemhando. Kana isu tiri kungotsvaga mhando yemhando, Sonos zvakare iri sarudzo yakanakisa iripo pamusika nekuda Sonos One SL, mutauri asina mamaikorofoni kunakidzwa nemimhanzi nehunhu hwatinokodzera.
Iyo Sonos Imwe SL nyowani, seSonos One, inoenderanawo neApple's AirPlay 2, iyo inotibvumidza kuti tigadzire mamiriro akasiyana mukamuri yega yega kubva pachigadzirwa chimwe chete. Iyi modhi yakagadzirirwa kushandiswa mune chero nzvimbo, kusanganisira iyo iri pamusoro pekicheni kana muchimbuzi, nekuda kweiyo kuramba humidity iyo yainotipa.
Tinogona kusanganisa Sonos One (modhi nemubatsiri) neimwe One SL mune imwechete kamuri kugadzira stereo kupatsanurwa uye kunakidzwa kujekesa ruzha. Naizvo tinogona kuishandisa sevatauri vekuseri kwenzvimbo yedu yemitambo ne Sonos Playbar, Sonos Playbase, kana Sonos Beam.
Iyo nyowani Sonos Imwe SL inotengeswa pamamiriyoni makumi maviri nemanaInowanikwa mumavara matema nemachena uye tinogona kuiwana yakananga kubva pawebsite yemugadziri uye kuzvitoro zvinogamuchirwa.
Ichi chishandiso chinobatana nezvimwe zvigadzirwa zviviri zvakaburitswa nekambani kuFIFA 2019 yakaitirwa muBerlin: Sonos Famba, bhatiri rinotakurika rine simba mutauri, ane mutengo iri 399 euros uye Sonos Port, chishandiso icho chatinogona kubatanidza kune yedu yazvino stereo uye kuibata nayo kuburikidza neyedu kifaa. Mutengo weSonos Port ndeye 449 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Mufananidzo uye kurira » Vatauri » Iyo nyowani Sonos Imwe SL, mutauri asina mamaikorofoni, ikozvino yawana ma199 euros
Huawei Tarisa GT 2: Iyo smartwatch nyowani iri pamutemo
Maitiro ekudzivirira anoparadzira esarudzo kubva pakusvika kubhokisi rako retsamba